« Bois de rose » naondran’ny HAT : Lasa “Blanco” ve ny Bianco? -
AccueilRaharaham-pirenena« Bois de rose » naondran’ny HAT : Lasa “Blanco” ve ny Bianco?
20/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa nosokajiana ho heloka be vava ny trafika-na « bois de rose » izany hoe afaka folo taona vao tapitra ny fanenjehana ireny fanondranana an-tsokosoko andramena tany ivelany ireny, indrindra tany Sina nandritra ny fitondrana Tetezamita. Maherin’ny 75 000 T ny « bois de rose » naondran’ny mpitondra HAT tao anatin’ny roa taona, horonantsary sy fijoroana vavolombelona maro no miparitaka any amin’ny tambazotra sy « internet » any ary voatonona manokana mihitsy ny anaran’ny filohan’ny HAT, Andry Rajoelina, ho an’ireo izay efa nahita ny horonantsary (http://www.youtube.com/watch?v=q7gaSpcyAXI). Hita ao amin’io horonantsary io avokoa ireo « bois de rose » an’arivony naondran’ny fitondrana Tetezamita ny taona 2010, ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo mpividy, sns.
Mitodika any amin’ny Bianco sy ny SMM ny mason’ny mpanara-baovao amin’izao fotoana mampalaza ity ady amin’ny kolikoly eto amintsika ity. Aiza ny Bianco sy ny SMM ary ny Fiarahamonim-pirenena (Rohy, ONG Ivorary, Wake Up Madagascar), ny Transparency International-Initiative Madagascar? Nahoana izy ireo no tsy mangataka fanokafana fanadihadiana momba ireo mpitondra HAT tamin’izao fanondranana harem-pirenena izao?
Fanodinkodinam-bolam-panjakana, fanondranana andramena an-tsokosoko maherin’ny 75 000 T, halatra, kolikoly avo lenta maro no nitranga nandritra ny fitondrana Tetezamita. Mampametra-panontaniana anefa ny fihetsik’ireto sehatra voalaza etsy ambony ireto minia tsy mahita izany zava-drehetra izany. Sanatria ve lasa “Blanco” hanadiovana ny heloka be vava vitan’ny mpitondra Tetezamita ny Bianco, ny SMM, ny Rohy, ny ONG Ivorary, ny Wake Up Madagascar, ny Transparency International-Initiative Madagascar ary ireo Fiarahamonim-pirenena havanana amin’ny fanaovana fanambarana tahaka ny SEFAFI?